OPPO F11 - Brilliant portrait in low light | OPPO Myanmar
48MP+5MP ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးမှာ အကြီးစားရုပ်ပုံအာရုံခံ၊ အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် အကောင်းဆုံးတွက်ချက် ပုံဖော်ပေးနိုင်သော AI စနစ်တို့ ပါဝင်သောကြောင့် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
48MP ကျောဘက် ကင်မရာနှစ်လုံး
Pixel များ ပိုမိုပါဝင်သောကြောင့် အဆုံးစွန်သော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသည့် ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
၈၀% ပိုမိုကြီးမားသော ဓာတ်ပုံအာရုံခံစနစ်နှင့် ကြီးမားသော အလင်းဝင်ပေါက်တို့ ပါဝင်သောကြောင့် အလင်းပုံရိပ်များ မှန်ဘီလူးထဲ ပုံမှန်ထက်
ပိုမိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။ OPPO F11 ဖြင့် ရိုက်ကူးသည့် ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အရယူပေးနိုင်သောကြောင့်
ပုံရိပ်တိုင်းကို တိကျပြတ်သားစွာ ဖော်ပြနိုင်အောင် မလိုအပ်သည့် အချက်အလက်တွေ ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ချက်တောင် လုပ်စရာမလိုပါ။
48MP+5MP ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးမှာ အကြီးစားရုပ်ပုံအာရုံခံ၊ အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် အကောင်းဆုံးတွက်ချက် ပုံဖော်ပေးနိုင်သော AI စနစ်တို့ ပါဝင်သောကြောင့် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
48 MP ကျောဘက် ကင်မရာနှစ်လုံး
မျက်နှာကောက်ကြောင်း ဆွဲခြင်း၊ မျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် အသားအရည်ကို အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာ
လေ့လာရသောကြောင့် ပုံရိပ်တိုင်းကို နောက်ခံမြင်ကွင်းမှ သိသာထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်လာအောင် အလိုအလျောက်
OPPO မှာ တပ်ဆင်ထားသော AI Ultra-clear Engine တွင် AI Engine၊ Ultra-clear Engine နှင့် Color Engine တို့
ပါဝင်ပါသည်။ AI Engine နှင့် Ultra-clear Engine တို့က ပြီးပြည့်စုံသော ညရှုခင်းရိုက်ကူးခြင်းကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမှာပါ။
AI Engine က အလိုအလျှောက်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားနှင့် ရှုခင်းများကို ရယူမှတ်သားပေးပြီး အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပေးပါလိမ့်မယ်။
လက်ဖြင့်ကိုင်ရိုက်ရသော အနေအထားတွင် MFNR က တူညီသော အလင်းပြဒီဂရီနှင့် ပုံလေးပုံကို ရိုက်ယူပေးမှာဖြစ်ပြီး HDR တွင် အလင်းပြဓာတ်ပုံသုံးပုံကို ရိုက်ကူးပေးမည်ဖြစ်သည်။
Ultra-clear Engine တွင် ပုံရိပ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ထိန်းညှိပေးရန် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သောကြောင့်
ကြာရှည်ဆွဲရိုက်ရသော အနေအထားနှင့် အလင်းရောင်အားမကောင်းသော အခြေအနေတွေကိုပါ အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပေး
နိုင်ပြီး အသားအရည်ကို ဖြူဝင်းမွတ်သောအနေအထားရရှိအောင်ပါ ဖန်တီးရိုက်ယူပေးပါသည်။
အဆုံးစွန်သော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသည့် ဓာတ်ပုံများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်။
The moment you takeapicture, OPPO’s exclusive AI Engine and Ultra-clear Engine has already optimized the picture inamultitude of ways to deliveracrisp clear portrait effect.
လင်းလက်တောက်ပစေမည့် Dazzle Color Mode
Dazzle Color Mode ကို AI Engine နှင့် Color Engine
AI Engine မှ ပုံဖမ်းရယူမှတ်သားပေးပြီး အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပေးပါသည်။
Color Engine က ကောက်ကြောင်းကောက်ပေးပြီး အလင်းနှင့်အရောင်
အရောင်များကို pixel အဆင့်ထိ ကောက်ကြောင်းဆွဲ
ပုံဖော်ပေးနိုင်သောကြာင့် ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံး အရောင်အသွေးကြွ လှပစေပါသည်။
အချိုးကျလှပသော ဒီဇိုင်းအသစ်၊ ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင်၊ ရောင်ပြေး
အလှတရားတို့က OPPO ၏ ဒီဇိုင်းသင်္ကေတပင်ဖြစ်ပါသည်။
OPPO F11 ရဲ့ ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်းက အဆုံးစွန်သော ကြည့်ကောင်းတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းမှာပါ။
OPPO F11 သည် ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်းကြောင့် အဆုံးစွန်ဆုံးသော ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
အဆင့်မြင့်ထားတဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
နည်းပညာတွေက နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုင်းကို အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
VOOC အမြန်အားသွင်းစနစ် 3.0
FFC စနစ်ဖြင့် တွက်ချက်ဖြေရှင်းပေးထားသောကြောင့် VOOC အမြန်အားသွင်းစနစ် 3.0 သည် ဖုန်းအသုံးပြုစဉ် ဖုန်းအား
ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးသည့် (trickle-charging) စနစ် ဆောင်ရွက်နေသည့်အချိန်ကာလအတွင်းတွင်ပင် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် ဖုန်းဆက်လက်အားသွင်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရာနှုန်းပြည့် ဖုန်းအားပြည့်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိရန်လည်း ယခင်ဗားရှင်းထက် မိနစ် ၂၀ ခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်မှုရှိသည်။
ကြီးမားသော ဘက်ထရီစွမ်းအင်ဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး အသုံးပြုနိုင်သည်။
Helio P70 မှ အားပေးပြီး 2.1GHz အထိ အသစ်ထပ်မံ အဆင့်မြင့်ထားသော processor သည် တာဗိုဖိအားမြှင့်တင်
ထားသောကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့စေပါသည်။
သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် ပမာဏများပြားသောကြောင့် သင်၏ လိုအပ်သော အချက်အလက်များအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါပြီ။
ဂိမ်း၊ အပလီကေးရှင်းနှင့် operating system တို့ တသီးတခြားစီ ပြုပြင်ချိန်ညှိနိုင်သည့် Hyper Boost စနစ်ကြောင့် ပြုပြင်
လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အလိုအလျောက် စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။
ပျမ်းမျှ Frame နှုန်းထား 59.7
Android 9.0 ကို အခြေခံပြီး အဆင့်မြင့်ထားသည့် ColorOS system သည် စမတ်ကျသော ကားမောင်းချိန်သုံး riding mode
စနစ်၊ လက်ဟန်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် လမ်းအညွှန်းအချက်ပြခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်သော smart assistant အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် အား
ကောင်းသော cloud service များကိုပါ မူဘောင်မပါ ဖုန်းမျက်နှာ
2. F11 adoptsa48MP+5MP dual rear camera.
3. Screen ratio of 90.70% is calculated by the projected area of screen display versus the projected area of touch plane.
4. F11 utilizesatypical battery value of 4020mAh.
6. AI Scene Recognition supports 23 scenes and objects: Night, Sunriseset, Snow, Gourmet, Blue Sky, Indoor, Grass, Text/Document, Landscape, Beach, Fireworks, Infant, Dog, Cat, Spotlight, Portrait, Multi Portrait, Macro, Pure Color, Backlight, Milo Moire, Flower, Greenery.
10. Product images are for reference only, please refer to the actual product. Colors may vary from different retailers. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used in this website is obtained from OPPO's technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers.
နေ့ခင်းဘက်ဖြစ်စေ၊ ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်စေ၊ အလှဓာတ်ပုံဖြစ်စေ၊ ရှုခင်းပုံဖြစ်စေ၊ F11 နှင့်ဆို အလန်းတကာ့ အလန်းဆုံးရုပ်ထွက်ကို ရရှိစေမှာပါ။
ချိန်ယူထားသည့် မြင်ကွင်းအတွင်းမှ ပုံရိပ်တိုင်းကို ပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူပေးနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်
ပုံရိပ်တိုင်းကို တိကျပြတ်သားစွာ ဖမ်းယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ထားသဖြင့် ချိန်ယူထားသည့် မြင်ကွင်းအတွင်းမှ ပုံရိပ်တိုင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်မည့် depth-of-field လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိစေပါသည်။
AI ဖြင့် ပုံရိပ်၏ ရိုက်ကွင်းအခန်းစပ်များကို မှတ်သားပေးနိုင်ပါသည်။
AI နည်းပညာဖြင့် ပုံရိပ်များကို ရိုက်ကွင်းအခန်းစပ် ၂၃ ခန်းကျော်ကျော် ဖမ်းယူမှတ်သားနိုင်စွမ်း ရရှိသည့်အပြင် မြင်ကွင်းတိုင်းကို သေချာစွာ ထိန်းညှိထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။
အခုဆိုရင် သင့်မျက်နှာပေါ်မာ အမှတ်အသားပေါင်း ၁၃၇ အထိ မှတ်သားပေးပြီး အလှပဆုံး မျက်နှာပြင်အနေအထားရအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သည့်အပြင်၊ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ သင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ့် ပြင်ဆင်မှုမျိုးကို မှတ်သားထားပေးနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချိန်ညှိခဲ့သည့်အတိုင်း အလိုအလျှောက်မှတ်သား ပြင်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။
ပြန်လည်ချိန်ညှိ တည်ဆောက်ထားသော အပိုင်းများ
အလင်းအာရုံခံစနစ်နှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့မှု အာရုံခံစနစ်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိထားပါသဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် အချိန်အတွင်းမှာ
တောင် အခြားသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ကာကွယ်ရန် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ပိတ်ပေးထားပါသည်။
Fluorite Purple ပြီးပြည့်စုံသောထောင့်များပါဝင်သည့်
ဖလူအိုရိုက်ကျောက် ရရှိရန်အတွက် နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းရမည်။
OPPO F11 သည် စိမ်းညိုရောင်နှင့် တည်ငြိမ်ခန့်ညားသော အနက်ရောင်ဒီဇိုင်းတို့
ရောယှက်နေပုံကို ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသဖြင့်ပြတ်သားတိကျသော ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းမှာပါ။
Ergonomics ပညာကို အထူးလေ့လာပြီး 3D နောက်ကျောဖုန်းကာဗာကို သေချာစွာ ထိန်းညှိထားပေးသောကြောင့် သင်ဘယ်လိုပဲ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲစေကာမူ လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
ကိုယ်ထည်ပိုင်းအား ပြန်လည်တည်ဆောက် ထိန်းညှိထားခြင်း
ကိုယ်ထည်ပိုင်း ကို သေချာစွာ ထိန်းညှိထားပေးသောကြောင့် သင်ဘယ်လိုပဲ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲစေကာမူ အကောင်းဆုံးသော အသံအရည်အသွေးကို ရရှိစေပါမည်။
စပီကာကို အကောင်းဆုံးချိန်ညှိနိုင်သည့် အနေအထားရအောင် တပ်ဆင်ပေးထားသည့်အတွက် အသံကြည်
ကြည်လင်လင်ဖြင့် ဂိမ်းကစားနိုင်၊ ဗွီဒီယို ကြည့်
စပ်ကြောင်းရာကို ဖျောက်ထားနိုင်ခြင်းက အားလုံးအတွက် ခေတ်ရှေ့ အပြေးဆုံး အသွင်အပြင်ကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။
အပိုင်း ၅ ပိုင်းကို တသီးတခြားစီ ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကြာရှည်သော ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ရရှိနိုင်
CPU လုပ်ငန်းများစွာ တစ်ချိန်တည်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုမရှိခြင်းကို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
RAM နှင့် ROM ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း
လုံလောက်သော သိုလှောင်မှုရရှိရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ RAM နှင့် ROM အပိုင်း ၄ ပိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Memory ကို ပြန်လည်စီစဉ်ချပေးခြင်း
zSTD ဖြင့် memory ကို ခြုံပေးခြင်း
နောက်ခံ memory ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း
Kmalloc memory ခွဲဝေပေးခြင်း
ဂိမ်းကစားသည့်အချိန် ဖြစ်စေ၊ အခြား အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို သုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ၊ အပလီကေးရှင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ လွှဲ
ပြောင်းသုံးစွဲသည့်အချိန်တွင် I/Q စောင့်ဆိုင်းချိန် လျော့နည်းအောင် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးထားသဖြင့် လုပ်ဆောင်မှု
စမတ်ကျသော antenna က တည်ငြိမ်သော signal အချက်ပြခြင်းကို ရရှိစေနိုင်သည်။ တဆင့်ခံ ဆင်းကဒ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ဂိမ်းကစားရာတွင်လည်း အနှောင့်အယှက်မရှိပဲ မြန်ဆန်ချောမွေ့စွာ ကစားနိုင်ပါသည်။ ကွန်ယက်လမ်းကြောင်း ၂ ခုပါရှိသည့် DCN စနစ်ပါဝင်သည့်အတွက် အင်တာနက်ကို အဆက်မပြတ်ပဲ သုံးစွဲနိုင်သည်။
စမတ်ကျသော antenna လုပ်နည်းစနစ်
ဆင်းကဒ်နှစ်ခုကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း
ကွန်ယက်လမ်းကြောင်း ၂ ခုပါရှိခြင်း
ဖုန်းမျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေတွင် အလူမီနီယံအနားကွပ်ကို ထည့်ပေးထားပြီး CPU အနီးတွင် အပူခံဂျယ်(လ်)ကိုပါ ထည့်
သွင်းပေးထားသည့်အတွက် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါသည်။
ဂိမ်းကစားရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသဖြင့် ပြေပြစ်သွက်လက်သည့် သတိပေးချက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊
ဖုန်းမျက်နှာပြင် ဂိမ်းမှတ်တမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သိုလှောင်ထားခြင်းနှင့် အခြားသော အထူးစီမံထားသည့် shortcut များဖြင့်
လျင်မြန်စွာပြုလုပ်ခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦးချင်းစီ သီးခြားဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် ဂိမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်တင်စေပြီး ဘက်ထရီအားကုန် သက်သာစေပါသည်။ ဂိမ်းကစားသူများအတွက်လည်း စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကစားနိုင်ရန် အထောက်အကူ
ကောင်းမွန်သော ဂိမ်းအသံစနစ်ကြောင့် သင့်ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းတွင် တကယ့်လက်တွေ့ ဝင်ရောက်ကစားသကဲ့သို့ ခံစားရစေပါသည်။